Hoolland: Bandhig faneed la baajiyey sababo la xiriira hanjabaado soo gaaray | Somaliska
Hoolland: Bandhig faneed la baajiyey sababo la xiriira hanjabaado soo gaaray
Magaaladda Rotterdam ee dalka Holland ayaa masrax ku yaala oo lugu qaban lahaa, la baajiyey kadib markii ay soo dhaceen warar sheegaya in la damacsan yahay in weeraro argagaxiso lugu fuliyo.
Booliska dalkaasi oo helay digniino uga yimid booliska Isbeeyn ayaa sheegay in bas yar ( nooca caasiga loo yaqaano) uu yahay gaari la doonayo in lugu fuliyo weerarkaasi. Bas isagana leh tilmaamaha booliska Isbeeyn bixiyeen ayaa lugu arkay goobta goobta bandhiga ka dhici lahaa, waxaana lugu qabtay dhalooyinka kuwa gaaska laga buuxiyo oo qaraxa dhaliya.
Axmed Abutaleb oo ah duqa magaaladaas Rotterdam oo saxafiyiin halkaasi gaaray la hadlayey ayaa sheegay in hanjabaadaha soo gaaray iyo gaariga ay qabteen xirriir ka dhaxeeyn karo. Balse waxaa uu sheegay in la qabtay darawalkii saarnaa oo dhalasho ahaan ah isbaanish.
Bandhig faneedkan oo ay qaban lahaayeen kooxda ameerikaan ah ayaa la baajiyey, iyadoo kooxdan magaca ay xambaarsan tahay yahay mid magaca Alle lugu lu lamaaniyey kaasoo sida muuqata ah mid muslimiinta lugu ihaaneeynayo horeyna ay dood u dhalisay. Kooxdan ayaa waxaa ka kaxeeyey meedha boolis amaankooda ilaalinaya.
Toddobaadkii ina dhaafay ayaa magaalooyin ka mid ah Yurub waxaa ka dhacya weeraro mindi iyo gaari dad lugu jiirsiiyey, waxaana falkaan sheegtay kooxda la baxday dowladda islaamiga ee Daacish